ပညာပေး Archives - MM Daily Life
April 16, 2021 by MM Daily Life
သစ္စာမဖောက်ရုံနဲ့ ပြီးပြီလား…? သစ္စာမဖောက်ရုံနဲ့ ပြီးပြီလား? တချို့တွေက တွေးတတ်ကြတယ်။ ကိုယ်ဟာ သစ္စာမဖောက်ဘူး။ အပျော်အပါး လွန်လွန်ကြူးကြူး လိုက်စားနေတာမရှိဘူး။ အချိန်တန်ရင် ယူမယ်။ ဒီလောက်ဆို ရပြီ ..။ အခြေအနေတွေက ဒီတိုင်းပဲ ဆက်သွားနေပြီး သူတစ်နေ့ကျ ကိုယ့်ကို မလွဲမသွေ ယူမှာပဲ။ သူနဲ့ကိုယ် ပေါင်းစည်းရမှာပဲ လို့ထင်တတ်ကြတယ် …။ တကယ်တော့ သမီးရည်းစား၊ လင်မယား ဆက်ဆံရေးဆိုတာ ဒီ့ထက်ပို နက်နဲပါတယ် …။ ဆိုးတာတွေ မရှိနေရင် ပြီးရောမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းတာတွေပါ လုပ်ပြတတ်ရပါတယ် … လူနှစ်ယောက် relationship တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ အချိန်တန်ယူဖို့ လူကြိုရှာထားတာမျိုးချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး …။ သူဟာကိုယ့်အပေါ် ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရပ် ရှိ မရှိ …၊ ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်လောက်စိတ်ထည့်ထားလဲ … Read more
Categories ပညာပေး Leaveacomment
အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသော ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်…
အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသော ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်… “ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ” အစွန့်ပစ်ခံ မိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောက်ျား ဖြစ်သူက ထားခဲ့လို့ ဖြစ်စေ …၊ ချစ်သူက ထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်း ယူသွားလို့ ဖြစ်စေ …၊ အပြစ်ရှာ ထွက်ခွာလို့ ဖြစ်စေ၊ စွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမ တစ်ချို့ဘဝ ပျက်မတတ် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ် …။ အမှန်က ပျော်ရမှာပါ။ လက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ ပျော်နေရမှာပါ …။ ကိုယ်ငယ်ရွယ် ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကိုယ့် တန်ဖိုး နားမလည်တဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနေပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြတ်သန်းရခြင်းထက် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမဲ့စွာ ဘဝ ကိုလွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ရခြင်းက ပိုကောင်းတယ် ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းမဟာ … Read more
ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေ ကျွန်မကိုလက်မလွတ်ပဲ ဆက်ချစ်နေမယ့်လူမျိုးကိုပဲလိုချင်တယ်…
April 15, 2021 by MM Daily Life
ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေ ကျွန်မကိုလက်မလွတ်ပဲ ဆက်ချစ်နေမယ့်လူမျိုးကိုပဲလိုချင်တယ်… ကျွန်မအတွက် သေရဲတဲ့ လူလည်း မလိုချင်ဘူး။ သတ်ရဲတဲ့ လူလည်း မလိုချင်ဘူး …။ သေရဲ၊သတ်ရဲတယ် ဆိုတာက အတ္တ ဒါမှမဟုတ် ဒေါသ ကြီးတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပဲ ကျွန်မတော့ မြင်တယ် …။ ထစ်ကနဲရှိ သေမယ် သတ်မယ်ဆိုတာ ချည်းပဲ ရှိလာတဲ့အခါ ဘဝက ဘယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းမလဲ …၊ သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာ သေရဲသတ်ရုံပဲလို့ မမြင်ဘူး …။ မှားတာတွေရှိလာတဲ့အခါ အမှန်ကို ပြင်ရဲတာလဲ သတ္တိပဲ …။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲနေပါစေ ကျွန်မလက်ကို မလွှတ်ပဲ ဆက်ချစ်နေမယ့် လူမျိုးကိုပဲ လိုချင်ပါတယ် …။ ကျွန်မ မှားသွားတဲ့အခါ အပြစ်တင် ပြောနေတတ်တဲ့ ပါးစပ်တစ်စုံထက် အမှားကို ထောက်ပြပြီး အမှန်ပြင်ပေးတတ်တဲ့ … Read more
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးသောအရာ…
April 11, 2021 by MM Daily Life
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးသောအရာ… ခိုးပြေးလို့ လက်ထပ်ရတဲ့ မိန်းကလေး တယောက် တန်ဖိုးနဲ့ တင့်တောင်းတင့်တယ် လူကြီးစုံရာနဲ့ တင်တောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်တန်ဖိုး ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ပါဘူး …။ ပစ္စည်းတောင်မှ သူ့တန်ဖိုး အလျောက် ဈေးကြီးပေးဝယ်တာနဲ့ ခိုးပြီး အလကားရတဲ့ ခိုးရာပစ္စည်း တန်ဖိုး အသီးသီး ရှိကြတာပဲ …။ နောက်တစ်ချက် ကိုယ့်ကို လာတောင်းလို့ ကိုယ့်ဘက်က သူနဲ့ စည်းမကျော်ထားဘူးဆို မိန်းကလေးဘက်က ကိုယ့်မိဘ မျက်နှာမငယ်ရဘူး …။ ခိုးပြေးပြီးမှ ပြန်လာအပ်ရင် ယောက်ျားလေးဘက်က ဘာပြောပြော ကိုယ့်မိဘတွေ မျက်နှာငယ်စွာ လက်ခံရတော့မယ် …။ ကိုယ့်သမီးက စည်းကျော်ပြီးပြီကိုး …။ သူ့သားက လှေကား သုံးထစ်ဆင်း လူပျိုပြန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်သမီးက အပျို ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့သလို … Read more
သင့်ကိုပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမူအကျင့်(၆)မျိုး…
April 10, 2021 by MM Daily Life
သင့်ကိုပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမူအကျင့်(၆)မျိုး… လူတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိမရှိဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်အသွင်အပြင် ပုံပန်းသဏ္ဏန်ချည်းနဲ့ပဲတော့ မဆိုင်ပါဘူး …။ ပြောချင်တာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဝနေလို့၊ ပိန်နေလို့၊ ရုပ်ဆိုးနေလို့၊ စတိုလ်က ဂွမ်းနေလို့ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုအပြင်ပိုင်း ပုံပန်းသဏ္ဏန်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး …။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင့်ရဲ့အပြုအမှု၊ သင့်ရဲ့ပုံစံပေါ်မှုတည်ပြီး ပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ …။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမူအကျင့်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ပွင့်လင်းပါ၊ အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါစေ။ ပွင့်လင်းပါဆိုတာ နေရာတိုင်းကို အကုန်လုံးလိုက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပါလို့ ပြောပါမျိုး မဟုတ်ပါဘူး …။ ဥပမာ – ပိုက်ဆံမချမ်းသာပေမယ့် ပိုက်ဆံရှိချင်ယောင် ဆောင်တာမျိုး၊ အမှားလုပ်မိပေမယ့် မသိချင်ယောင်ဆောင် … Read more
ဂုဏ် သတင်းမွှေးတဲ့ မိန်းကလေး…
ဂုဏ် သတင်းမွှေးတဲ့ မိန်းကလေး… ညီမလေးရေ မိန်းကလေးဆိုတာ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်လို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ရမယ် …။ အိနြေ္ဒသိက္ခာ ရှိရမယ် …။ စိတ်သဘောထားဖြုစင် သန့်ရှင်းရမယ် …။ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း ကောင်းမွန်ရပါမယ် …။ နေရာတကာ ယောက်ျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနေချင်လို့တော့ မရပါဘူး …။ မိန်းကလေးဆိုတာ အရာရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မူတွေ ရှိ နိုင်ရပါမယ် …။ ညီမလေးရေ ပန်းကလေးတွေဟာ အဆင်းနဲ့ရနံ့ အမျိုးမျိုးရှိကြသလို မိန်းကလေးတွေကလည်း အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ အကျင့်စရိုက်အမျိုးမျိုး ရှိတတ် ကြပါတယ် …။ မိန်းကလေးတွေရဲ့အဆင်းဟာ ပန်းကလေးတွေရဲ့ အလှဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချင်းကတော့ ပန်းကလေးတွေရဲ့ ရနံ့နဲ့ ဆင်တူပါတယ် …။ ညီမလေးရေ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်ဟာ အဆင်းသဏ္ဌာန် မလှပပေမယ့် အများတစ်ကာကို … Read more
ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လက်ထပ်ဖို့ လုံးဝမရွေးချယ်သင့်တဲ့လူ(၄)မျိုး…
April 9, 2021 by MM Daily Life
ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လက်ထပ်ဖို့ လုံးဝမရွေးချယ်သင့်တဲ့လူ(၄)မျိုး… တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နေရ နေရ ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးက ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ အချစ်တစ်မျက်နှာပဲ ကြည့်ပြီး တစ်ဘဝလုံး စိတ်မချမ်းမြေ့စေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးကို ရမှာမျိုးက လက်တွေ့မှာတော့ အဆင်ပြေမနေပါဘူး။ ဒါကြောင့် လက်မထပ်ခင်မှာ သေချာ စဉ်းစားသင့် ပါတယ် …။ လက်မထပ်ခင် စဉ်းစားတဲ့အချက်ထဲမှာ အခုလို လူမျိုးတွေဆိုရင် ပိုပြီးတောင် သတိထား သင့်ပါတယ်နော် …။ (၁) စိတ်ညစ်အောင် အမြဲလုပ်သူ” ဘဝတစ်ခု တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ ဆိုးတူကောင်းဘက် အတူ ဘဝကို ဖြတ်သန်းတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူဘဝကတော့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို အကဲဖြတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို အမြဲ စိတ်ညစ်အောင် စိုးရိမ်နေအောင် ပြုလုပ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ သတိထားပြီး စဉ်းစားသင့်ပါတယ် … Read more
အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေဖို့ ဒီနည်းကို မဖြစ်မနေသုံးပါ…
အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေဖို့ ဒီနည်းကို မဖြစ်မနေသုံးပါ… “ချစ်ခြင်းရဲ့လျို့ဝှက်ချက်” နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်တိုင် ပြသနာလုံးဝမဖြစ်စေတဲ့ နည်းလေးပါ။ စုံတွဲတွေ အဆင်ပြေစေချင်လွန်းလို့ ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ တစ်ခါတုန်းက လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက် ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှ ကတောက်ကဆ မဖြစ်ဖူးဘူးလို့ မြို့မှာ နာမည်ကြီးပါတယ် …။ ဒါကြောင့် နယ်ခံသတင်းစာရဲ့ အယ်ဒီတာက အဲဒီ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို မေးမြန်းဖော်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ် …။ အယ်ဒီတာ ဒီအဖြစ်အပျက်က မယုံနိုင်စရာ အံ့အားသင့်ဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီလိုအိမ်ထောင်ရေးမျိုးကို ဘယ်လိုများ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါလဲ ခင်ဗျာ။ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူတို့ရဲ့ Honeymoon နေ့ရက်တွေကို ပြန်တွေးရင်း ပြောပြပါတယ်… “ကျွန်တော်တို့တွေ … Read more
တန်ဖိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်… ပထမ လူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒုတိယ လူပဲ ဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးဆိုတာ ထားတဲ့ လူအပေါ် မှာပဲ မူတည် ပါတယ် နော် . . .။ သင့်ကို ချစ် ပါ တယ် ဆိုတဲ့ လူ ထက် သင့် ကို တန် ဖိုး ထား တဲ့ လူ ရဲ့ ဘဝ ထဲ မှာ ပဲ ရှင်သန် လိုက်ပါ . . .။ သင့် ကို ချစ်တဲ့ လူထက် သင့် အကြောင်း ကို အပြည့်အဝ နားလည်ပေး နိုင်တဲ့ လူကသာ … Read more
April 6, 2021 by MM Daily Life
မိန်းမတစ်ယောက်ကဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ သူ့လက်တွဲဖော်နဲ့ညှိမရနှိုင်းမရနဲ့သဟဇာတမဖြစ်တော့ဆုံးလဲသိလား မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ သူ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ညှိမရနှိုင်းမရနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တော့ဆုံးလဲ သိလား …? ဥပေက္ခာတွေနဲ့ နေသားကျသွားတဲ့ အချိန်ပဲ . . .။ အချစ်ကို လိုနေချိန်မှာ အချစ်မခံရတဲ့ မိန်းမ၊ နွေးထွေးမှုကို တောင့်တနေချိန်မှာ အေးတိအေးစက် ဆက်ဆံခံရတဲ့မိန်းမ . . .၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ ကြင်နာတာတွေကို မျှော်လင့်နေချိန်မှာ လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းမ . . .၊ အဲ့လိုမိန်းမတွေ အေးစက်သွားတဲ့အခါ ယောက်ျားတွေ မာကျောပါတယ် ဆိုတာထက် ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ ကောင်းသွားတတ်ပါတယ် . . .။ သူတို့လိုအပ်နေချိန်မှာ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုခံလိုက်ရတဲ့ အတွက် မချစ်တတ် မကြင်နာတတ်တဲ့ဘဝမှာ နေသားကျသွားတဲ့ အချိန်က ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပါပဲ … Read more
ယောက်ျားလေးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ချစ်သူကောင်းတို့ရဲ့ ကျင့်ဝတ်များ… April 16, 2021